Tsy hita izay iombonana sy mampiombona | NewsMada
Tsy hita izay iombonana sy mampiombona
Par Taratra sur 02/09/2016
Mbola misy iombonana sy mampiombona ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao? Mihambo ho voafidim-bahoaka ny mpitondra; ny vahoaka, efa tsy matoky firy intsony… Mila porofo? Jereo ny famoriam-bahoka afitsoky ny mpitondra: indraindray, manarama olona toy ny fanatrehana ny matson’ny 26 jona, ohatra.
Misy elanelana ho azy eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra. Mihalalina izany, mihalavitra… Ho tonga hatraiza? Tsy milaza izay ataony ny mpitondra, tsy ataony izay lazainy. Tratran’ny tian-kano tsy tian-kano hatrany ny vahoaka, tampohina lava amin’ny amboletra, anaovana andranandrana amin’ny tsy fisian’ny fangaraharana…
Mby aiza, ohatra, izao ny “Raharaha Soamahamanaina”? Tsy fantatra toy izay niandohany ihany. Lazaina sy mody hetsehina ny hoe fiaraha-midinika, fa atao ihany ny atao amin’ny lalàn’ny fifandraisana… mamono fahafahana. Eo koa ny fitsarana manokana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra… misy ambadika politika.
Tsy mahagaga raha manjaka ny an-kifonofono afitsoky ny mpitondra, ny honohono tsy fidiny avy amin’ny sarambabem-bahoaka. Samy olon-ko azy? Na samy mandeha, samy mitady. Mitady izay fomba rehetra hitanana fahefana ny mpitondra; sempotry ny fitadiavana isan’andro vaky noho ny fahasahiranana ny vahoaka.
Izany hatrany no iainana hanaperan’ny mpitondra ny fe-potoam-piasan’ny hatramin’ny taona 2018? Ahina hihamafy sy hihasarotra aza… Mangina sy tsy mihetsika ny vahoaka ka hararaotina? Tsy ahoana koa izay miteny sy mitaraina rehetra; izay mitady hihetsika, rahonana mialoha na tsy avela hikofoka fotsiny izao.
Mandra-pahoviana no hizakana sy hahazakana izao? Tsy misy mampiombona, na ny fiaraha-mizaka ny fahasahiranana sy ny fihafiana ihany aza. Ny fampiakaram-peo etsy sy eroa aza, tsy zakan’ny sasany ka valina bontana amin’ny vava tsy ambina. Vao mainka ny feo sy ny hetsiky ny vahoaka, raha mitroatra… Izay no andrasana?